ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သွားနေကြသလဲ – zlkontempo
Posted on January 4, 2008 | by zlkontempo
ဟာ ခေါင်းစဉ်အဖြစ် တပ်ထားတဲ့အတွက် ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ရှင်းလင်းချက်တစ်ခု ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ သဘော လည်း ပါတာပေါ့။ `ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သွားနေကြသလဲ´ ဆိုတာကို ရှင်းလင်းတော့မယ့်သဘောပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီဝါကျဟာ အမေး ၀ါကျလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ မေးခွန်းမှာ မေးသူ ၊ အမေးခံ ၊ မေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေ ပါလာပြီးသားဆိုတော့ မေးသူဟာ `ကျွန်တော် တို့´ ၊ အမေးခံဟာ လောလောဆယ်ပျောက်နေတယ် ၊ မေးတဲ့အကြောင်းအရာက `ဘယ်သွားနေကြသလဲ´။ `ကျွန်တော် တို့´ဟာ ဘယ်သူ့ကို မေးနေတာလဲ။`ကျွန်တော်တို့´ကို`ကျွန်တော်တို့´ကပဲပြန်မေးနေတာလား။ ဒါဆို ၁။ `ကျွန်တော်တို့´ ဘယ်သွား နေကြသလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ကပဲ ပြန်ဖြေနိုင်လိမ့်မယ်နဲ့ ၂။ `ကျွန်တော် တို့´ကပဲမေးတဲ့ အတွက် `ကျွန်တော် တို့´မှာအဖြေ မရှိလို့ (၀ါ)မသိလို့။ အဖြေမရှိ ၊ မသိတဲ့ `ကျွန်တော် တို့´ဟာ အဖြေမရှိ၊ မသိတဲ့ `ကျွန်တော်တို့´ ကိုမေးခွန်းမေးပြီး အဖြေတောင်းနေတယ်။
`ကျွန်တော်တို့´ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲ။ အခု ဒီအရေးအသားကို ရက်လုပ်နေတဲ့ ဇေယျာလင်းလား။ လူပုဂ္ဂိုလ် ဇေယျာလင်း လား။ ကလောင်အမည် တစ်ခုလား။ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ နေ့စဉ်မပြတ်ဆက်စပ်နေတဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း ၊ မြန်မာ့လူမှုစီးပွားယဉ်ကျေးမှု အဆောက်အအုံထုကြီးထဲက ၊ အဲဒီအဆောက်အအုံထုကြီးက ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဇေယျာလင်းဆိုတဲ့ ယူနစ်တစ်ခုလား။ သမိုင်းခေတ် တစ်ကန့်ထဲက အပေါ်ထပ်အဆောက်အအုံနယ်ပယ်ထဲမှာ လူးလာရင်း လူအဖြစ်တတ်သိသမျှ ၊ တတ်နိုင်သမျှ ၊ အကန့်အသက်များကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ကြိုးစားလူလုပ်နေရတဲ့ မိမိကိုယ်မိမိ လူအဖြစ်သိသာပြီး လူဖြစ်ခြင်းအလုပ်ကို အိုးစားမကွဲသေးသရွေ့ ကြိုးစားလုပ် ကိုင် (ပြုမူ ၊ ပြုလုပ် ၊ ဖန်တီး ၊ တည်ဆောက် ၊ ရုန်းကန် ၊ လှုပ်ရှား)နေရတဲ့ သက်ရှိအရာတစ်ခုလား။ သဘာဝအင်အားနဲ့ လူလုပ်အင်အား ရှေ့မှောက်မှာ အလွယ်တကူကျိုးပဲ့ ၊ ကျကွဲ ၊ ပျောက်ကွယ် ၊ သေကြေ ၊ ပျက်ဆီး ၊ ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့ အင်အားမဲ့ အင်းဆက်တစ် ကောင်လား။
မဟုတ်ဘူး ဆိုပါတော့။ အဲဒီ`ကျွန်တော် တို့´ဟာ ကိုယ်စားပြုနာမ်စားတစ်ခုပဲ ဆိုပါတော့။ ဘာကို ကိုယ်စားပြုသလဲ။ ကိုယ်စားပြုပေးဖို့ အသိအမှတ်ပြုခံထားရလို့ ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ နာမ်စားလား။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ တစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြုလိုက်မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ တာဝန်ယူ ၊ နေရာယူ ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ယူပြီး ကိုယ်စားပြုခွင့်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ရေးသား ၊ အတည်ပြု ၊ လက်မှတ်ထိုး။ တရားဝင်သွားတဲ့ ကိုယ်စားပြုနာမ်စားလား။ ဥပမာ ၊ `ကျွန်တော်တို့´ဟာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကို မကြိုက်တော့တဲ့ လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ `ခေတ်ပေါ်ကဗျာကို မကြိုက်ကြတော့တဲ့ လူငယ်တွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်´ဟု ပြောင်းဖတ်လို့ရ ၊ မရ။ `ဘယ်လူငယ်တွေ´ လူငယ် ဘယ်နှယောက်ဟာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကို မကြိုက်ကြတော့မှန်း စစ်တမ်းများကောက်ထားခြင်း မရှိသေးသဖြင့် ထိုမသိ ၊ မရှိသေးသော “လူငယ်´ထုကို ကိုယ်ကပဲ ကိုယ်စားပြုလိုက်မယ်´ လို့ အနက်ကောက်လို့ ရ ၊ မရ။ `ကျွန်တော်တို့´ဟာ ကဗျာကို အသက်တမျှ ချစ်ခင်တွယ် ဖက်ပြီး ပြည်သူ့ဘက်က ရဲရဲကြီးချီတက်ရေးဖွဲ့နေကြတဲ့ ကဗျာရေးသူအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုဖို့ ဘယ်သူတွေဟာ ဘယ် တုန်းက ကိုယ်စားပြုခွင့်ကို ယုံကြည်စွာ အပ်နှံခြင်းခံထားရတဲ့ `ကျွန်တော် တို့´လဲ။
`ကျွန်တော်တို့´ဆိုတာ `ကျွန်တော်´ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့အတွက် `ကျွန်တော် တို့´ထဲမှာ `ကျွန်တော်´တွေအရေ အတွက် ဘယ်လောက်ပါရှိသလဲ။ `ကျွန်တော်တို့´ထဲမှာ `ကျွန်တော်´တွေဘယ်နှယောက် ပါရှိသလဲ။ အဲဒီ `ကျွန်တော်´တွေဟာ ဘယ်လို ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ၊ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းများရဲ့ အကြောင်းကြောင်းများကြောင့် “ကျွန်တော်တို့´ဖြစ်သွားသလဲ။ `ကျွန်တော်´ တွေကို `ကျွန်တော် တို့´အဖြစ်ကပ်ပေးလိုက်တဲ့ ကော်ဟာ ဘာလဲ။ `ကျွန်တော်´ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ `ကျွန်တော်´ ဖြစ်မှုထဲက အစိတ် အပိုင်းအချို့ကို ဖယ်ရှား (ပယ်ဖျောက် ၊ လိုမှ ထုတ်ယူ)ပြီး `ကျွန်တော်တို့´ ဆိုတဲ့ အစုအဝေး တစ်ခုဖြစ်လာအောင် ဘာတွေပေးလှူ ၊ ပေးဆက် ၊ ပေးစပ်လိုက်ကြလို့ `ကျွန်တော် တို့´ဖြစ်သွားကြတာလဲ။ `ကျွန်တော် တို့´ဟာ လက်မောင်းသွေးဖောက် ထားကြတဲ့ သွေးသောက်ညီအကို ရဲဘော်တွေလား ၊ သံမဏိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာ(အောက်မှာ ၊ ဘေးမှာ ၊ အနီးအနားမှာ ၊ တ၀ိုက် မှာ) အလံတော်တစ်ခုအောက် ၀ယ်လို လာရောက်စုစည်းကြတဲ့ အတွေးတူ ၊ အယူတူ (အပေးတူ ???) သူတွေလား ၊ အခြေခံ အယူ အဆတစ်ခုပေါ်မှာသာ တူပြီး လုပ်နည်းကိုင်နည်းနေနည်းထိုင်နည်း လွတ်လပ်ကွဲပြားစွာ လျော့လျော့ရဲရဲ(မဖွဲ့စည်းထားတဲ့) အဖွဲ့လား။ အခြားရှိရင်လည်း ဆက်လက်ချဲ့ထွင်ရေးသားတင်ဆက်ကြပါရန်နှင့် `ကျွန်တော်တို့´လား။
`ကျွန်တော်တို့´ကို `တတွေ´နဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် မူလ `ကျွန်တော်တို့´ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရွေ့၊ မရွေ့။ `ကျွန်တော်တို့´တတွေ။
`ကျွန်တော်တို့´လို့ဆိုတော့ `ခင်င်္ဗျားတို့´ ၊ `သူတို့´၊`အခြားတို့´မပါကြတော့ဘူးလား။ သီးခြား အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ပြီး တံဆိပ်မပါ ၊ မလာရ ၊ မ၀င်ရ ၊ မဆက်ဆံရ ၊ မရောနှောရ ၊ မကူလူးရ ၊ မပတ်သက်ရ စတဲ့ပိတ်ပင်ချက်တွေနဲ့ ပ ထုတ်လိုက်မှာလား။ ခင်ဗျားဖြစ်ဖြစ် ၊ သူဖြစ်ဖြစ် ၊ အခြားဖြစ်ဖြစ်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ`ကျွန်တော်´ပါလို့ပြောလာရင် အဲဒီ `ကျွန်တော်´ဟာ `ကျွန်တော်တို့´ ထဲက`ကျွန်တော်´တွေနဲ့ ဘာကွာခြားသွားသလဲ။ `ကျွန်တော်´ချင်းအတူတူဘယ် `ကျွန်တော်´ကမှ မူလအစစ်အမှန် `ကျွန်တော်´ လဲ။ ကဲ ၊ စာဖတ်သူ ကျွန်တော်တို့ `ကျွန်တော်တို့´ဖြေပေးပါလား ၊ `ကျွန်တော်တို့´ရေ။
`ကျွန်တော်တို့´ဆိုတာဟာ မိမိကိုယ်မိမိ`ကျွန်တော်´ လို့ပြောနိုင်သူ ၊ ပြောတတ်သူ ၊ ပြောချင်သူ ၊ ပြောခွင့်ရှိသူအားလုံးရဲ့ ဘုံအဖွဲ့အစည်းလား။ ဟုတ်ကဲ့ `ကျွန်တော်တို့´ရဲ့ အကျယ်အ၀န်းဟာ ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ အထူးတင်းကြပ်စွာ ပိတ်ပင်ထား ပါသလား။ အားလုံးနဲ့ ဆိုင်ပြီး အားလုံးပိုင်တဲ့ ဟိုအ၀ှာလား။ `ကျွန်တော်တို့´ရဲ့ သဘောထားကို ကျွန်တော်များအား သိခွင့်ပေးနိုင်ပါသ လားခင်ဗျာ။ `ကျွန်တော်တို့´ကို ကျွန်တော်များ ဘယ်လိုသဘောထားဆက်ဆံရမလဲဆိုတာ အရိပ်အမြွာပြောပြနိုင်ပါသလားခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်များရဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို `ကျွန်တော်တို့´လို့အမည်တပ်ခွင့်ရှိပါသလားခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သွားနေကြသလဲ။ ဘယ်သူ့ကို မေးတာလဲ။ အဲဒီအမေးခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ `ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သွားနေ ကြသလဲ´ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို `အင်းကွဲ့ ၊ မောင်ရင်တို့ သွားနေကြတာဟာ အဲဒီဘက်ပဲ´လို့ပဲ ပြောအားရှိရှိနဲ့ ပြောမှ ပြောမလားပဲ။ `သူများ သိမလားလို့ လိုက်ပါနေကာမှ သူကပဲ ပြန်မေးနေရရှိသေး ၊ ကတည်းမှပဲ´ လို့များ (မြိုသိပ်) ဖြေဆိုမလားပဲ။ `ကျွန်တော်တို့´ ဘယ်သွားနေကြသလဲဆိုတော့ ဘယ်သွားလို့သွားနေမှန်းမသိဘဲ သွားနေကြတာဟာ တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ တစ်ယောက်ထက်များတာပေါ့။ အများများလားမသိဘူး။ ပေါ့။ အကယ်၍ အဖြေဟာမရှိသလို( မသိလို့မရှိ ၊ မရှိလို့မသိ ၊ မသိလို့မရှိ ၊ မရှိလို့မသိ) နဲ့ တစ်ခုထက်မက ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကော ၊ ဆိုပါစို့။ ဥပမာ ၊ ညောင်ပင်လေးဈေးသို့ ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုသို့ ၊ ငုအိမ်ဆိုင်သို့ ၊ ကဗျာသစ်သို့ ၊ ဂြိုလ်ပြာလေးသို့ ၊ အမှန်တရားသို့ ၊ မဇ္စျိမပဋိပဒါသို့ ၊ ကမ္ဘာသစ်သို့ ၊ ရေဝေးသို့ ၊ အမှတ် ၂၁၀ ၊ သိမ်ဖြူလမ်းဟု အမည် တွင်အမည်ပေါက် ခဲ့သော ယခုလောလောဆယ် ဆိုင်းငံ့ကာရံမြေကွက်လပ်၏ တစ်ရံတစ်ခါက စီမံကိန်းတစ်ခုသို့ ၊ သူမရဲ့ တင်ပါးဆုံရိုး တည့်တည့်ပေါ်က ရွေ့နေတဲ့ မှည့်ရှင်လေးသို့ ၊ အနိစ္စသို့ ၊ သတ်မှတ်ထားသောပန်းတိုင်သို့ ၊ မနက်စာ ညစာမကြောင့်မကြရပဲ စိတ်အေး ဖူလုံစွာစားသောက် နေထိုင်လို့ရရာ အရပ်ဆီသို့ ၊ ဘာသာစကားအခြေပြုကဗျာသို့ ၊ မဂ္ဂဇင်းတိုက်သို့ ၊ ဒပ်ဖရင် အမျိုးသမီး မီးဖွားဆောင် သို့ ၊လူနာကုတင်နံပါတ် ၄၂ သို့ ၊ ကဖ္ဖကာ၏ ရဲတိုက်သို့ ၊ ကနောင်မင်းသား၏ ရေမြှုပ်ဗုံးစမ်းသပ်ခဲ့ရာသို့ ၊ ဟိုင်နန်ကျွန်းသို့ ၊ မဲသဝေါသို့၊ အာဘူဂရာ အစ်ဗ်အကျဉ်းစခန်းသို့ ၊ အော်စကာဆုပေးပွဲအခမ်းအနားသို့ ၊ အလောင်းပျောက်သေခြင်းသို့ ၊ ပြည်သူ့ခံစားချက်ရင်ဘတ် ကြီးသို့ ၊ တောင်မြောက်လမ်းဆုံသို့ ၊ အတွေးသစ် အရေးသစ်ဆီသို့ ၊ မျှော်လင့်ချက်များမြစ်ဖျားခံရာသို့ ၊ သ လုံးကြီးတင်တစ်ချောင်း ငင်အောက်ကမြင့်သို့ ၊ ဘုရားသခင်သို့ ၊ မည်သူမျှ တရားဥပဒေအထက်တွင် မရှိစေရသို့ ၊ ဒစ္စနီလဲန်ဒ်သို့ ၊ သရဲရထားသို့ ၊ `က´မှ`အ´ အထိတည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အအုံနဲ့ ဘာသာစကားနယ်ပယ်များသို့ ၊ `ပဲပြုတ်နဲ့နံပြားစားချင်တယ်´ သို့ ၊ `အချိန်ရဲ့ သမိုင်း´သို့ ၊ ဟိုက်ဇင်ဘက်သို့ ၊ ချားလ်စ်ဘန်း ၊ ဂါးထရုဒ်နဲ့ ၀စ်ဂင်တို့အစပြုတဲ့ စတိုင်းန်သုံးစတိုင်းန်သို့ ၊ ဆင်မြူလခရာသို့ ၊ ဟိုက်ပါရီရ လတီသို့ ၊ မေတ္တာသုတ်သို့ ၊ ၀ါကျတစ်ကြောင်းတည်းတွင် စကားလုံးတစ်လုံးကိုပဲ အဖွင့်အပိတ်သုံးခြင်းဟုခေါ်ဆိုသည့် အက်ပါနလက်ပ် ဆစ် apanalepsis (ဥပမာ ၊ Live and let Live) သို့ ၊ ဂုဏ်နဲ့အလင်္ကာရ ၊ ၀ါစနာလင်္ကာရများသို့ ၊ ဘူမိနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့် ဂေဟဗေဒစနစ် တို့၏ အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုနိဒါန်းနှင့် နိဂုံးသို့ ၊ ကျေးလက်ကဗျာထဲပျောက်သွားတဲ့ ကျေးလက်သို့ ၊ တစ်တောလုံးပြုန်းတီးပြီးကာမှ `သစ်ပင် မခုတ်ရ´သို့ ၊ အန္ဒြိုမီးဒါးကြယ်စုသို့ ၊ အရိုးအိုးသို့ ၊ အကြမ်းဖက်သမားများတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရေးသို့ ၊ ပထုံပဏီ ထမံသီမှာဖြစ်ခဲ့ တယ်သို့ ၊ . . . သို့ ၊ . . . သို့ ၊ . . . သို့ ၊ . . . သို့ ၊ . . . သို့ ၊ . . . သို့ ၊ . . . သို့ ၊ . . . သို့ ၊ . . .
မှတဖန်`ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားနေကြသလဲ´ထံသို့။ ပြန်ရောက်လာပြီလား။ ချောချောမောမောပဲလား။ လမ်းခရီးမှာ အဖိုးတန်ပစ္စည်း တစ်ခုခုများပျောက်ရှကျန်ခဲ့သလား။ ဧကန်ပြန်ရရှိဖို့ ကျွန်တော်များနဲ့ ဆက်သွယ်ပါ။ ဘယ်က ပြန်လာသလဲ။ မောင်ရေခဲ ၊ မောင်ရေခဲ ၊ ဘယ်သွားနေလဲ မောင်ရေခဲ။
Pussycat, pussycat မောင်ရေခဲ ၊ မောင်ရေခဲ
Where have you been? ဘယ်သွားနေလဲ မောင်ရေခဲ။
I’ve been to London ဘုရားပွဲကို လှည်းနဲ့ဆို
to see the Queen ဘာမြင်ခဲ့လဲ မောင်ရေခဲ။
အခု ကျွန်တော်တို့ ဘယ်မှာရှိနေကြသလဲ။
အခုရှိနေတဲ့နေရာမှာ မရှိခင် ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာ ရှိခဲ့သလဲ။
အခုရှိနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ ရပ်နေသလား ၊ သွားနေသလား။
အခုရှိနေတဲ့ နေရာဟာ ရပ်နေသလား ၊ သွားနေသလား။
နေရာဆိုတာ အာရုံသိမြင်ပုံမှာကပ်နေတဲ့ ချေးညှော်လား။
ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ချွတ်မရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြေးခွံတွေလား။
ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ချွတ်ပစ်ချလိုက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြေးခွံတွေလား။
ကျွန်တော်တို့ဆင်သွားရင်လမ်းဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဆင်ကန်းတောတိုးလား။
ဘယ်ကြယ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို လမ်းပြပြီး ဘယ်အကျဉ်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဝပ်ဆင်းနေရသလဲ။
ကျွန်တော်တို့သိလို့သွားနေတာလား ၊ သိသလိုလိုနဲ့လား ၊ လုံးဝမသိပဲနဲ့လား။
ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှမသွားဘဲ အခုရှိနေရာမှာ စုံလုံးရပ်နားနေလို့မရဘူးလား။
ကျွန်တော်တို့ စုံလုံးရပ်နားနေကြတာကမှ ပိုမကောင်းဘူးလား။
ကျွန်တော်တို့သွားနေတာ လမ်းရှိလို့လား ၊ လမ်းဖြစ်ပြီလား ၊ လမ်းလွဲလား။
ရှိပြီးသား သိပြီးသားရာသီစက်ဝန်းထဲမှာပဲ ကျွန်တော်တို့တ၀ဲလည်လည်သွားနေတာလား။
သွားရိုးသွားစဉ်သွားလမ်းအတိုင်း သွားရိုးသွားစဉ်သွားနည်းအတိုင်း သွားနေကြတာလား။
ရိက္ခာစုံရဲ့လား ၊ မြေပုံပါရဲ့လား ၊ ရှေးဦးသူနာပြုသေတ္တာလေးပါရဲ့လား ၊ အိမ်မြှောင်ပါလား။
သိမှုကနေ မသိမှုဆီလား ၊ မသိမှုကနေသိမှုဆီလား။
ကြပ်ခိုးမှိုင်းတွေစွဲငြိညစ်ကပ်နေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟောင်းတွေနဲ့ပဲ ဆက်သွားနေတာလား။
ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့နေရာကို ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ရင် အဲဒီနေရာကို မှတ်မိပါ့မလား။
ကျွန်တော်တို့ကို ကျွန်တော်တို့ အဲဒီနေရာမှာ မှတ်မိပါ့မလား။
ကျွန်တော်တို့ဘယ် (မှာ) သွားနေကြ(တာ)လဲ။
ဘာသာစကားထဲကနေ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သွားနေကြသလဲ။
ဘာသာစကားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သွားနေကြသလဲ။
၄ ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၈ (လွတ်လပ်ရေးနေ့)